အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးစေတဲ့ အတွေး (၈) ခု
မကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေဟာ သင့်ကို စိတ်ထိခိုက်စေပြီး သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက် ယုံကြည်မှုတွေ ယုတ်လျော့စေပါတယ်။
၁. ငါ့ရည်မှန်းချက်တွေက မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။
တစ်ခုခုဆို ထင်တယ် ထင်တယ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အထင်တွေနဲ့ ဘ၀ကို မတိုင်းတာပါနဲ့။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဘ၀မှာ မရှိပါဘူး။ ပန်းတိုင်တစ်ခု အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့ဟာ ဘယ်တော့မှမလွယ်ကူဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ သင့်ရဲ့ အနာဂတ်ပန်းတိုင်းကို တစ်လှမ်းချင်းသာလျှောက်ပါ။ တစ်နေ့ပန်းတိုင်ရောက်မှာ သေချာပါတယ်။
တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ငါအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့တွေးတာမျိုး မကြာခဏ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီစိတ်ကူး အတွေးတွေကို ပြောင်းပြီး တစ်ခုခုစလုပ်ကြည့်ပါ။ ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ မဆင်သင့်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆို သင့်ကို အတားအဆီးဖြစ်စေတာက ငါ့မှာ အရည်အချင်းမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတဲ့ အတွေးပါပဲ။ သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဒီအတွေးက ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ဘာမှမလုပ်ခင်မှာ ဘာမှမပြည့်စုံသေးပါဘူး။
၄. ဘ၀က ခက်ခဲလိုက်တာ
သင်ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ ဘ၀ဆိုတာ ရုန်းကန်နေရဦးမှာပါပဲ။ ကိုယ့်အတိုင်းတာနဲ့ကိုယ် ရုန်းကန်ကြရမှာပါ။ ဘာမှမရုန်းကန်မကြိုးစားဘဲ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကြီး ထိုင်ညည်းနေမယ်ဆို ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၆. ငါ့မှာ အချိန်မရှိဘူး။
အမြဲတမ်း တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆိုရင် ငါ့မှာအချိန်မှ မရှိတာဆိုတာမျိုးက သင့်ကိုစိတ်ဓါတ်ကျစေမှာပါ။ သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရှိပါတယ်။
၇. ဘယ်အရာမှ ငါမကောင်းကောင်းမကျွမ်းကျင်ဘူး။
ဘယ်အရာကိုမှ ငါကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးက သင့်ဘ၀ကို ဟိုးအောက်ဆုံးထိ ဆွဲချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကထက် ဒီနေ့ကိုသာ သင်အာရုံစိုက်ထားပါ။
၈. ငါက အရှုံးသမားတစ်ယောက်ပါပဲ။
« English listening ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ???
ဥာဏ်ထိုင်းစေမည့် ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံ ၁၀ မျိုး »